Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY : Fampandrosona mitanila
INTY SY NDAY : Fampandrosona mitanila
Nanao fanambarana teny amin’ny “Analamanga Park”, toeram-pialamboly eny Ampangabe-Antananarivo Atsimondrano ny filohampirenena Rajoelina ny sabotsy teo fa “hotombanana ny asa nataon’ny Governora isa-paritra”. Ny dikan’izay dia hisaorana ny tsy nahitam-bokany. Fantatry ny maro tokoa ny asa atao sy vitan’ny Governora sy ny tsy natao sy tsy vitan’izy ireny. Tsarabe ilay fanamby nofaritan’ny filohampirenena satria matoa nomena andraikitra sy fahefam-panjakana ny olona iray dia itakiana vokatra izy izay. Tsy tokony hadinoina fa volam-bahoaka no omena hiasan’izy ireny ary karamaina amin’ny volam-bahoaka izy ireny. Ny fitaovana iasany koa dia avy amin’ny vahoaka. Misy ny mpiasa misahan-draharaha amin’ny ankapobeny eo anivon’ny fitantanana ny Faritra tantanin’ny Governora, ary ny asa asaina ataon’ny sehatra tsy miankina izay nifanaraka tamin’ny fiadidiana ny Faritra dia ny volam-bahoaka koa no ampiasainy.
Voalohany indrindra aloha, na tsy manisy fitenenana mivantana toa izany aza ny filohampirenena dia lojikan-draharaha ny fitakiana valiny amin’ny asa nampisahanina ny mpiasam-panjakana amin’ny ankapobeny. Na mpiandry tanàna (gardien) aza dia itakiana vokatra ny asa nampanaovina azy, mainka fa tompon’andraiki-panjakana toy ny Governora.
Tsy voatery manao tombana (evaluation) amin’ny asa nampanaovina ny tompon’andraikitra namapiantsorohana asa ny filohampirenena fa na zavatra iray ihany aza no tsy efany nefa ain-dehiben’ny vahoaka ao amin’ny faritra, eny fa na nahavita zavatra maro aza izy tao anatin’ny asany, dia tsy heloka ny misaotra azy satria nanala baraka ny fanjakana amin’ny ankapobeny. Izay ilay hoe “singam-bolo nandavo ny sovotra”.
Fa etsy ankilany, inona koa moa no tena fototra iorenan’ilay tombana satria hirosoana? Misy amin’ireo faritra no efa nanendrena Governora roa taona lasa fa ny sasany vao herinandro lasa. Dia tombanana amin’inona ilay Governora efa tamin’ny roa taona ary tombanana amin’ny inona ilay vao voatendry?
Na tombanana amin’inona ary na inona ifotorana amin’ny tombana aloha dia mibaribary ny vokatr’izany tranga izany, dia ny fampandrosoana mitanila. Tsy tokony hadinoina fa nomen’ny fitondram-panjakana foibe tamin’ny alalan’ny filohampirenena fitaovana goavana maromaro enti-mampandroso ireny Faritra ireny, toy ny fanamboaran-dalana, ny Governora. Ny dikan’izany , na iza nitantana ilay Faritra na iza, dia tsy nahazo ilay fitaovana ilay Faritra raha tsy mbola voatendry ny Governora. Ny akon’izany voalohany dia tratra aoriana ny fanamboarana ny asa tokony ho nampiasana ireny fitaovam-be ireny. Mazava ho azy fa “fampandrosoana mitanila” no misy e! Na inona fanazavana aloha na inona, na hisy tombana na tsia, tsy hahafaly ny vahoakan’i Betsiboka ny tsy nanendrena ny governora tany raha tsy vao herinandro mahery izay.
Miteraka fahakiviana eo amin’ny vahoaka izany, na inona resahina na inona fa tsy azo hamaivanina. Ankoatry ny tsy fisian’ny antoka ho amin’ny tombontsoam-bahoaka dia hiteraka fihenan’ny fitokisan’ny vahoaka amin’ny filohampirenena ireny.
Tsy maintsy mitandrina sy manarina ny tsy nety izany ny fitondrana foibe e!